Tanzania mikendry ny tsenan'ny mpizahatany sinoa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tanzania mikendry ny tsenan'ny mpizahatany sinoa
Tanzania izao dia mikendry an'i Sina ho loharanom-barotra marobe mpizahatany any Azia atsimo atsinanana aorian'ny loharanom-pivarotana nentim-paharazana any Eropa, Amerika Avaratra ary Afrika Atsimo.
Ekipa tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Tanzania Tourist Board (TTB), minisiteran'ny fizahantany, orinasam-pizahantany ary mpandray anjara hafa no nitsidika an'i Shina tamin'ny Novambra 2018 mba hivarotra ny fizahan-tany an'i Tanzania any Beijing sy ireo tanàna sinoa manan-danja hafa.
Ireo tompon'andraikitra ao Tanzania dia efa nitsidika sy nikarakara seho fizahantany tany amin'ny tanàna sinoa dimy any Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Chengdu ary Beijing.
Miaraka amin'ny Masoivoho Sinoa ao Dar es Salaam, TTB dia mikasa ny hampiroborobo ny fizahan-tany Tanzania any Shina amin'ny alàlan'ny programa fifanakalozana izay misy mpanao gazety koa, hoy ny tompon'andraikitra.
Ny Birao (TTB) dia nanao sonia ny memoam-pahatakarana (MOU) niaraka tamin'ny Touchroad International Holdings Group of China mba hivarotra ireo fizahan-tany fizahan-tany any Tanzania amin'ireo tanàn-dehibe sinoa.
Touchroad Group dia nanao fifanarahana tamin'ny Tanzania Tourist Board (TTB) izay hahita ny orinasa sinoa mandefa mpizahatany manodidina ny 10,000 any Tanzania amin'ity taona ity, hoy ny tompon'andraikitra TTB.
Nandray anjara tamin'ny fampirantiana fizahan-tany sy fampirantiana isan-karazany any Sina ny Birao fizahan-tany, mikendry ny hampiharihary ny vokatra fizahan-tany an'i Tanzania, indrindra ny biby dia, ny morontsiraky ny Ranomasimbe Indianina ary toerana manan-tantara.
Ny Birao dia miara-miasa amin'ny governemantan'i Tanzania amin'izao fotoana izao mba hivarotra ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ho vokatra fizahan-tany vaovao. I Shina dia eo an-tampon'ireo firenena manerantany tadiavin'i Tanzania hisarika kaonferansa.
Ny fihaonana, fanentanana, kaonferansa ary fampirantiana (MICE) dia vokatra fizahan-tany vaovao izay iasan'ny TTB amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing any Shina.
Tanzania dia neken'ny birao nasionalin'ny fizahan-tany momba ny fizahantany (CNTA) ao Beijing ho iray amin'ireo firenena mendrika ny fitsidihan'ny mpanao fialantsasatra sinoa i Tanzania.
Nanangana tsena ny TTB hanehoana ny fiainana dia, ny lova ara-kolotsaina, ny Tendrombohitra Kilimanjaro, ireo toerana manan-tantara ary ny morontsiraky ny Ranomasimbe Indianina mankany amin'ny tsenan'ireo mpizahatany sinoa.
Toerana fitsangantsanganana afrikanina hafa nofonosina ho an'ny mpizahatany sinoa dia i Kenya, Seychelles, Zimbabwe, Tonizia, Etiopia, Mauritius, ary Zambia.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany eran-tany (UNWTO) dia nanisa an'i Shina ho isan'ireo tsena fizahan-tany mpizahatany eto amin'izao tontolo izao.
Tanzania dia mikasa ihany koa hisarika ny mpampiasa vola sinoa amin'ny sehatry ny fampiantranoana sy ny fandraisam-bahiny hanangana trano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny sy fotodrafitrasa hafa toy izany izay manolotra nahandro sinoa.
Ny mpizahatany sinoa any Tanzania dia nitombo tamin'ny 30,000 tamin'ny taon-dasa raha 13,760 no isaina tao anatin'ny dimy taona lasa.
Ny tsena fizahan-tany sinoa izao dia paikady tsy voatery avelan'i Tanzania ho raisina ankoatry ny tsena nentim-paharazana, ny ankamaroan'ny Etazonia, Eropa, Japon ary Afrika Atsimo.
Vaovao misimisy kokoa avy any Tanzania.